အမေရိကန်တွင် အာကာသ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး စတင်မည် - Yangon Media Group
ဝါရှင်တန်၊ ဇူလိုင် ၁၄
အာကာသခရီးသွားလုပ်ငန်း အား လာမည့်လ အနည်းငယ်အ တွင်း စတင် ခရီးထွက်ခွာနိုင်လိမ့် မည်ဟု Virgin Galactic နှင့် Blue Origin ကုမ္ပဏီ ကြီးနှစ်ခုက စီစဉ်နေသည်ဟု ဇူလိုင် ၁၄ ရက်သတင်းများအရသိရသည်။ သို့သော် ရက်အတိအကျ မသတ်မှတ်နိုင်သေးဟုလည်း သိရသည်။
Blue Origin အာကာသခရီးသွား ကုမ္ပဏီကြီးအား အမေဇုန် အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင် ရှင် ဂျက်ဖ်ဘီဇိုက တည်ထောင်ထား ခြင်းဖြစ်ပြီး Virgin Galactic အာကာသ ခရီးသွားကုမ္ပဏီကြီးအား ဗြိတိန်ဘီလျံနာသူကြွယ်ကြီး ရစ်ချတ်ဘရန်ဆန်က ဦးစီးတည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ခရီးစဉ်ရက် အတိအကျ မသတ်မှတ်ရသေးသော်လည်း Packagetour များအဖြစ် လက်မှတ် ကြိုတင်ရောင်းချမည်ဟုသိရသည်။ အသွားအပြန် ခရီးစဉ်အတွက် ဒေါ်လာသန်းချီ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကုမ္ပဏီကြီး နှစ်ခုသည်လည်း အာကာသခရီးစဉ် သူ့ထက်ငါ ဦး ရန် ခရီးထွက်နိုင်ရေးအတွက် နည်း ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြိုင်ဆိုင်မှုများ ပြုလုပ်နေကြသည်ဟုလည်း သိရှိ ရသည်။ အာကာသသွားလိုသူ ခရီး သည်များသည် အာကာသအတွင်း အလေးချိန်မဲ့ဖြစ်ရပ်အား ခံစား နိုင်ရန် အထူးစိတ်ဝင်စားနေကြ သည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။
အာကာသ ကမ္ဘာ့လေထု လွှာအတွင်း မိုင်ပေါင်းများစွာ ရွေ့ မျောနေရမည်ဖြစ်သည်။ ခရီးစရိတ် သက်သာသည်ဟုဆိုရမည့် Virgin ကုမ္ပဏီက ဒေါ်လာ ၂၅ဝဝဝဝ တောင်းခံထားသည်။ Blue Origin ကုမ္ပဏီ၏ ခရီးစရိတ်မှာမူ မသိရှိရသေးချေ။ ကမ္ဘာမြေပြင်မှ ကီလိုမီတာ ၁ဝဝ (သို့မဟုတ်) ၆၂ မိုင်အတွင်း အာကာသတစ်ခွင်လုံး မှောင်မိုက်နေမည်ဖြစ်ပြီး လူများ ကမ္ဘာမြေပြင်ကြီးအား ကြည် လင်ပြတ်သားစွာ ပြန်လည်မြင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ အာကာသခရီးစဉ် တစ်ခေါက်၌ ခရီးသည် ခြောက်ဦး အား လေယာဉ်မှူးနှစ်ဦးက မောင်းနှင် ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်ဟု Virgin Galactic ကုမ္ပဏီက ကြေ ညာထားသည်။ ယင်းတို့သည် ကမ္ဘာ့ဆွဲငင် အားမဲ့ အခြေအနေ၌ မိနစ်အနည်း ငယ်ကြာ မျောပါခွင့်ကြုံရပြီးနောက် ကမ္ဘာမြေကို ပြန်လာကာ ခရီးစဉ် ပြီးဆုံးမည် ဖြစ်သည်။
အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ဥပဒေကြမ်းပါ ပြစ်ဒဏ်များတွင် ထောင်ဒဏ်များ ပါနေခြင်?
ဘရာဇီး ဘီလျံနာသူဌေး ရိုချာ သမ္မတပြိုင်ပွဲမှ နုတ်ထွက်
ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်၌ ကေဘယ်ကား လမ်းကြောင်းသစ် တစ်ခု ထပ်မံပြေးဆွဲရန် ယခင် ကေဘယ်ကား တည်ဆော?
နှစ်ပွဲဆက်အနိုင်ရပြီးနောက် မြန်မာအသင်းဆီမီးဖိုင်နယ်တက်ရန် အခြေအနေကောင်းမွန်ခဲ့
(၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁ဝဝဝ တန်ထီဖွင့်ပွဲအတွက် ထီစာအုပ် နှစ်သိန်း ခြောက်သောင်းကျော် ရောင်းချရ??
သီပေါဟော်မှ ဘုရားဆောင်ကြီးကို ပြန်လည် တည်ဆောက်မည်
သူရဲကောင်း စစ်သည်များအား အလေးပြုခြင်းနှင့် လွမ်းသူ့ပန်းခွေချခြင်း အခမ်းအနားပြုလုပ်